Tropical Storm Franklin nwere ike bụrụ oke ifufe n'ime awa ole na ole sochirinụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Tropical Storm Franklin nwere ike ibu oke ifufe n'ime awa ole na ole sochirinụ
Claudi ego | | Oké ifufe
Oké mmiri ozuzo Franklin, ọ ga-ebuwanye ike ka awa na-aga. A na-ebu amụma na ọ ga-abụ oke ifufe tupu ya ebute ụsọ mmiri nke steeti Veracruz. Gọọmentị Mexico enyela ajọ ifufe "ịdọ aka na ntị" site na Port nke Veracruz ruo Tuxpan.
Oké ifufe ahụ gafere Yucatan Peninsula na Tuesday dị ugbu a na mmiri nke Ọwara Mexico. Ọ na-aga n'ihu na ọsọ nke 17km / h, yana ifufe kachasị ogologo nke 85km / h, mana aturu anya ka odi “dika CNH siri kwuo.
1 Oké ifufe Franklin taa
2 Franklin na awa ole na ole sochirinụ
Oké ifufe Franklin taa
Tropical Storm Franklin na elekere asaa nke ụtụtụ, oge UTC.
Ọ bụ ugbua ugbua na "iwusi ike". Mmiri mmiri dị elu ga-amasị Karịa oké ifufe nke mere na ọ na-aga n'ihu na-esiwanye ike. Alberto Hernández, onye nhazi izugbe nke SNM kwuru, "ọ nwere ike bụrụ ajọ ifufe", nke otu 1 n'ụkpụrụ, na ọkwa Saffir-Simpson.
Site na mbido, onweghị ndị ọ ga-arịrị na-akwa arịrị, ihe niile o mebilarị ka ọ belata, ndị ọchịchị kwuru. Na Quintana Roo, enwere ụfọdụ nkwukọrịta, mana n'ehihie ụnyaahụ e weghachitere ha ọzọ. N'otu aka ahụ, a rụọla ọrụ kachasị elu, na-eche Franklin ka ọ daa mba ọzọ n'ụdị Hurricane.
Franklin na awa ole na ole sochirinụ
Foto nke otu esi atụ Franklin anya mgbe ọ ga-eru ala
Dị ka a pụrụ ịhụ na onyonyo a, Franklin ga-enwekwu ike. Ihe oyiyi ahụ na-anọchi anya ya nke kachasị kachasị na ọ nwere ike iru, n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 24 emesịa gaa na nke ugbu a, ihe onyonyo gara aga. A na-ewere onyonyo abụọ ahụ iji mata ifufe dị na 500 mita karịa ọkwa mmiri.
A na-atụ anya ifufe gafere 100km / h. Ndị ọchịchị dọrọ aka ná ntị banyere oke mmiri ozuzo nke oké ifufe ahụ ga-eweta, ma nwee ike ibute oke idei mmiri na-egbu egbu agbatịwo ọkwa na ọkwa dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ifufe » Tropical Storm Franklin nwere ike ibu oke ifufe n'ime awa ole na ole sochirinụ
METEOROLOGIST MIGUEL BARRIENTOS SANTIAGO dijo
KA ANY COM KWESMENTR THAT N'ỌD I NA M B A, N'ỌRỌ ỌGW TOGW OF AH OFR OF QUINTANA ROO; Akpọrọ MAHAHUAL MUNCIPALITY OF CHETUMAL Q.ROO, YBỌCH OF nke Ọbịbịa nke Frank, na ihe niile nwere ntụle ọcha, ọ dịghị ihe ga-akwa ụta, na-enweghị mbibi nke ndị njem nlegharị anya na ọnụọgụ nke ebe ahụ.
Zaghachi METEOROLOGIST MIGUEL BARRIENTOS SANTIAGO
//Site na mbido, ọ dịghị mkpa iru uju, na mmebi ihe niile o mebilatala, ndị ọchịchị na-akọ. Na Quintana Roo, ọ bụrụ na e nwere ụfọdụ nkwukọrịta na-ebelata, mana ehihie ụnyaahụ e weghachiri ha ọzọ.//
Ọ bụ naanị ihe e kwuru, ụfọdụ ebipụ. O nwedịrị ike ị gaghị achọpụta. N'otu aka ahụ, ọ dịghị ihe ọzọ ekwuru na Quintana Roo, ebe ọ bụ na post a raara nye Franklin.
Oke okpomọkụ nke Europe na-ahapụ ugwu Alps na enweghị snow
Kedu ihe bụ na otu esi amalite mmiri mmiri?